Zvakawanda Sarudzo Vagadziri & Vatengesi - China Zvakawanda Sarudzo Fekitori
Zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvinovimbwa nevashandisi uye zvinogona kusangana zvichiramba zvichisimukira mune zvehupfumi uye zvemagariro zvido zveMamwe Sarudzo,,,, Hunhu hupenyu hwefekitori, Tarisa pane zvinodiwa nevatengi zvinogona kuve sosi yekupona kwekambani nekusimudzira, Isu tinoteerera kutendeseka uye kutenda kukuru kushanda maitiro, uchitarisa kumberi pakuuya kwako! Isu tine redu rakakura rekutengesa timu, dhizaini uye dhizaini vashandi, tekinoroji vashandi, QC vashandi uye package package. Isu tave neyakaomarara mhando maneja maitiro eese system. Zvakare, vese vashandi vedu vane ruzivo mune yekudhinda indasitiri yeMore Sarudzo, Anokodzera R & D mainjiniya achave aripo kune rako rekubvunza sevhisi uye isu tichaedza zvatinogona kuti tiite zvaunoda. Saka ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kuti tibvunze. Iwe uchakwanisa kutitumira isu maemail kana kufona isu kune bhizinesi diki. Zvakare iwe unokwanisa kuuya kubhizimusi rako wega kuti uwane zvimwe kuziva kwedu. Uye isu zvirokwazvo tichakupa yakanakisa kotesheni uye mushure mekutengesa sevhisi. Isu takagadzirira kuvaka hukama hwakagadzikana uye hushamwari nevatengesi vedu. Kuti tibudirane tibudirire, tichaedza nepatinogona napo kuvaka kubatana kwakasimba uye basa rekutaurirana riri pachena nevamwe vedu. Pamusoro pazvose, isu tiri pano kuti tigamuchire kubvunza kwako chero kweedu zvinhu uye basa.
PD258V Anti Bark Imbwa Collar
PD258V isimba-repamusoro rechargeable hapana bark collar ine hardcover carton. PD258V Anti Bark Imbwa Collar ndeyemhando yepamusoro yakangwara otomatiki kuhukura yekudzora chishandiso, icho chinongoshandisa vibration yambiro kugadzirisa imbwa maitiro. Inokodzera imbwa hombe, dzepakati nepadiki kupfeka
Iko kunzwisisika kunogona kugadziriswa, uye mushandisi anogona kusarudza iyo senzwi yakakodzera zvinoenderana nesimba rembwa yekuhukura kurira. Kune mashanu magiya ekugadzirisa, iyo yekumusoro giya iri yepakati 3 magiya. Paunodzvanya mabhatani ekugadzirisa "+" uye "-", beep inorira. Iyo yakakwira iko kunzwisisika, zviri nyore kuita kuti basa riitwe.
PD258S Kwete Bark Imbwa Collar
PD258S ipasi-simba rechargeable anti-bark collar, ine zviyeuchidzo zvine mutsindo uye yambiro yekuyambira, inokodzera kumisikidza hunhu hwembwa diki nepakati. Iyo huremu hwehuremu hwechigadzirwa ndi33g, izvo zvisingaite kuti imbwa inzwe kuremerwa kana kuipfeka. PD258S Hapana Bark Imbwa Collar inobhadhariswa kwemaawa maviri, inogona kushandiswa kusvika kumazuva makumi matanhatu uye nguva yekumira inopfuura mazuva zana nemakumi masere, yakasimba kwazvo. PD258S ine matanho mashanu ekugadzirisa kugadzikana. Iwe unogona kugadzirisa imbwa yakasarudzika senzwi nekudzvanya kuruboshwe uye kurudyi mabhatani maererano akasiyana imbwa kuhukura mamiriro. Uye zvakare, inogona zvakare kutarisa yakasara mamiriro ebhatiri, iri nyore kuti vanhu vabhadhare chishandiso munguva. PD258S inogona kusvika IP65 nhanho yekudzivirira mvura, kuitira kuti igone kushandiswa zvakajairika kunyangwe mumazuva ekunaya kana mumvura.
PD218 Hapana Bark Imbwa Collar yakagadzirirwa neLCD yedhijitari yekuratidzira skrini, iyo inoona mashandiro ekuona, zvichiita kuti zvive nyore uye zvive nyore kushandisa. Iyo ine matatu mabasa: kurira chiyeuchidzo, vibration chiyeuchidzo uye yemagetsi kushamiswa yambiro. Saka mashandiro ePD218 Hapana Bark Imbwa Collar inogona kushandiswa mumisanganiswa yakawanda, yakakodzera imbwa dzehunhu hwakasiyana uye nemhando dzemuviri. Iyo yakavakirwa-mukati inogona kudzoserwa bhatiri inogona kushandiswa kakawanda kuburikidza ne USB yekuchaja chiteshi, uye inogona kubhadhariswa kwemaawa maviri uye inogona kuwana yakareba yakareba yakamira nguva inosvika kumazuva makumi matanhatu.
Kunze Isina Mvura Imbwa Imba 424 inogadzirwa yakasarudzika yemhando yepamusoro PP zvinhu, yakasimba uye yakasimba, isina hwema uye isina chinonaka. Kana ichishandiswa kunze, haigone chete mumvuri uye kuvhara mhepo, asi zvakare kunaya nekufema, ichipa yakachengeteka uye yakagadzikana yega yega nzvimbo kune imbwa. Tichifunga nezvekushandiswa kwemhando dzakasiyana dzembwa, ine saizi mbiri: 424-S uye 424-L. 424-S imbwa yakakosha imbwa diki imbwa (senge Shiba Inu, Corgi, nezvimwewo), nepo 424-L yakagadzirirwa imbwa hombe (senge Alaska, Mufudzi wechiGerman, nezvimwewo).
Kunze Isina Mvura Imbwa Imba 403 inouya muhukuru hutatu uye inogona kushandiswa kumakati nembwa dzemhando dzakasiyana. Tichifunga nezvetsika dzembwa diki nekitsi, pane zvakatarwa zviviri zvemhando diki - yemusuwo maitiro uye isina musuo maitiro. Kunze Isina Mvura Imbwa Imba 403 inotora dhizaini dhizaini kuwedzera kutenderera kwemhepo, inoenderana nekupedza uye nekunhuhwirira kubvisa, uye chengetedza mhepo iri imbwa imba nyowani. Iyo isina kutsetseka mativi eves dhizaini inogona kunyatso kudzivirira mvura yemvura kuti isapinda mumba uye kugonesa kuchenesa kweimba imbwa. Musuwo wakachengetedzwa nekiyi yekuchengetedza, iyo inogona kuvhurwa mumativi ese ari maviri uye iri nyore kushandisa. Mhepo inofefetedza mweya yakagadzirirwa munzvimbo zhinji dzemumba kusimbisa kufefeterwa uye kupedza mukati meimba kubvisa hwema uye kudzivirira hwema. Nheyo yacho inogona kubviswa nyore nyore kuitira nyore kuchenesa. Uye imba yese yakaungana kudzikisa homwe yekupakata uye kudzikisa kutakura.